Berbatov oo ka aragti dhiibtay wararka la xiriirinaya Man…
By jojo Last updated May 31, 2020
(Yurub) 31 Maajo 2020. Waxaan wali la hubin mustaqbalka xiddiga reer Brazil iyo kooxda Barcelona ee Philippe Coutinho, maadaama uu wali sugayo inuu ku biiro naadi cusub, inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaaga ee soo aadan.
Manchester United ayaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay kooxaha lala xiriirinayo inuu ku biirayo xiddiga reer Brazil, si la mid ah kooxaha Chelsea, Arsenal, Leicester City iyo Newcastle United.
Laakiin weeraryahankii hore kooxda Manchester United ee Dimitar Berbatov ayaa u muuqda mid aan raali ka aheyn in Philippe Coutinho uu ku biiro Red Devils.
Wargeyska “Mirror” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Dimitar Berbatov waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Dadka qaar waxay maqleen wararka ku saabsan inuu u dhaqaaqayo Man United, laakiin shaqsiyaad dhowr ah ma hilmaami doonaan inuu ahaa ciyaaryahan Liverpool ah isla markaana u dhaqaaqay kooxda uu xilfaltanka soo jireenka ah kala dhexeeyo, laakiin marka runta laga hadlo United-ka hadda uma baahna isaga”.
“Bruno Fernandes waa xiddig la mid ah kan reer Brazil, marka uu ku dhaqaaqo garoonka dhexdiisa waxay u muuqataa inuu yahay heshiis balanqaad ah, sidaas darteed uma maleynayo inay jiri doonto sabab kasta ee lagula soo saxiixan karo Coutinho”.
“Pogba wuu soo laabtay, sidoo kale Bruno Fernandes, Scott McTominay wuxuu soo bandhigayaa kubad wanaagsan, kooxda waxay leedahay tayo ku filan, sidaas darteed saxiixa Coutinho wuxuu noqon doonaa wax aan faa’iido laheyn”.
Si kastaba ha noqotee, Philippe Coutinho ayaa u dhaqaaqay kooxda Barcelona bishii January ee 2018, wuxuuna kaga soo dhaqaaqay Liverpool qiimo dhan 145 million euro.
Laakiin uma uusan muuqan sidii la filaayay kaddib imaatinkiisa kooxda Barcelona, sidaas darteed wuxuu qaab amaah ahaan ugu dhaqaaqay Bayern Munich xilli ciyaareedkan.
jojo 1046 posts
Brexit talks resume in London after tricky week in Brussels
Determined seek for survivors as dozens feared deceased in…
Barcelona Oo Xanaq Kula Dul dhacday Villarrea, Rajadeedii